Vaovao - marika inona amin'ny antsy CNC malaza amin'ny taona 2020
Ny fitaovana CNC dia fitaovana ampiasaina amin'ny fanapahana amin'ny famokarana mekanika, fantatra koa amin'ny hoe fitaovana fanapahana. Amin'ny heviny malalaka, ny fitaovana fanapahana dia ahitana fitaovana fanapahana sy fitaovana manimba. Mandritra izany fotoana izany, ny "fitaovana fanaraha-maso isa" dia tsy vitan'ny fanapahana loaka fotsiny, fa koa ny kojakoja toa ny fitaovan'ny fitaovana sy ny fitaovan'ny fitaovana. Amin'izao fotoana izao dia ampiasaina amin'ny tokantrano na fanorenana daholo izy ireo. , Betsaka ny toerana, ka inona no fitaovana tsara tokony hatoro anao? Ireto misy fitaovana CNC malaza ho an'ny rehetra.
Iray, KYOCERA Kyocera
Kyocera Co., Ltd. dia mandray ny "Fanajana ny Lanitra sy ny Fitiavana ny olona" ho teny filamatra ara-tsosialy, "mikatsaka ny fahasambarana ara-materialy sy ara-panahy ho an'ny mpiasa rehetra sady manampy amin'ny fivoarana sy fampandrosoana ny zanak'olombelona sy ny fiaraha-monina" ho filozofian'ny orinasa. Orinasa marobe manomboka amin'ny faritra, fitaovana, milina ka tambajotra serivisy. Ao amin'ireo indostria telo an'ny "mombamomba ny fifandraisana", "fiarovana ny tontolo iainana", ary "kolontsaina fiainana", dia manohy mamorona "teknolojia vaovao", "vokatra vaovao" ary "tsena vaovao."
Roa, Coromant coromant
Sandvik Coromant dia natsangana tamin'ny 1942 ary an'ny Sandvik Group. Ny foiben-toerany dia ao Sandviken, Suède, ary manana orinasa mpamokatra felika karbida simenitra lehibe indrindra eto Gimo, Suède. Sandvik Coromant dia manana mpiasa maherin'ny 8.000 manerantany, manana biraon'ny solontena any amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 130, ary manana ivon-toerana mahomby 28 sy ivon-toerana fampiharana 11 manerantany. Ivontoerana fizarana efatra any Netherlands, Etazonia, Singapore ary Sina no miantoka ny fandefasana vokatra marina sy haingana amin'ny mpanjifa.
Telo, LEITZ Leitz
Leitz dia manangona 5% amin'ny totalin'ny varotra amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana isan-taona. Ny valin'ny fikarohana dia misy fitaovam-pitaovana, firafitra, fitaovana enti-miasa amin'ny tontolo iainana ary mitahiry loharano, sns. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana teknolojia mitohy, dia mivoatra ny haitao vokatra mahomby hanomezana antsy mahomby kokoa, sariaka ary azo antoka ny mpampiasa.
Efatra, Kennametal Kennametal
Ny asan'ny mpisava lalana sy manavao, tsy miovaova ary mijery akaiky ny filan'ny mpanjifa no fomba fanaovan'i Kennametal hatramin'ny nananganana azy. Nandritra ny fikarohana nandritra ny taona maro, ny metallurgist Philip M. McKenna dia namorona karbida simenitra tungsten-titanium tamin'ny 1938, izay namorona zava-bita lehibe tamin'ny fahombiazan'ny fanapahana vy rehefa nampiasaina tamin'ny fitaovana fanapahana ny firaka. Ny fitaovana "Kennametal®" dia manana hafainganam-pandeha haingam-pandeha haingana kokoa sy androm-piainany lava kokoa, noho izany dia mitarika ny fampandrosoana ny fanodinana vy avy amin'ny famokarana fiara ka hatrany amin'ny fiaramanidina mankany amin'ny indostrian'ny milina manontolo.
Dimy, KAI Pui Yin
Beiyin-dia manana tantara lava efa ho zato taona any Japon. Ny vokatra dia mizara ho: hety matihanina avo lenta (mizara ho hety akanjo sy hety taovolo), hareza (lahy sy vavy), vokatra hatsaran-tarehy, vokatra ao an-tokatrano, takelaka fitsaboana, Miaraka amin'ny kalitao tena tsara, manarona firenena maro eto an-tany ny tamba-jotra. . Tano ny anjaran'ny tsena iray, ary ekeo ny mpanjifa marobe, miaraka amin'ny fifaninanana matanjaka eo amin'ny tsena. Miaraka amin'ny fanitarana tsy tapaka ny tsena sinoa dia nanangana ny Beiyin Trading Co., Ltd. i Beiyin tamin'ny aprily 2000, izay tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana sy ny varotra ny tsena sinoa. Ny fivoarana sy ny fidiran'i Beiyin dia ahafahany miorim-paka ary lasa mavitrika amin'ny tsena sinoa.
Enina, havoana Seco
SecoToolsAB dia iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana karbida efatra lehibe indrindra manerantany ary voatanisa ao amin'ny Stockholm Stock Exchange any Suède. Ny Seco Tool Company dia mampiditra R&D, famokarana ary fivarotana fitaovana karbida simenitra isan-karazany ho an'ny fanodinana vy. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny indostria toy ny fiara, ny aerospace, ny famokarana herinaratra, ny bobongolo ary ny fanamboarana milina. Fantatra eo amin'ny tsena manerantany izy ireo ary fantatra amin'ny anarana hoe "The king of milling".
Ny orinasa Walter dia nanomboka namorona fitaovana fanapahana vy karbôna simenitra tamin'ny taona 1926. Ny mpanorina, Andriamatoa Walter, dia manana teknolojia manana patanty mihoatra ny 200 amin'ity sehatra ity, ary Walter dia nitaky hatrany ny tenany tamin'ity sehatra ity. Mikely aina ho amin'ny fampandrosoana, dia namorona vokatra feno isan-karazany ankehitriny, ary ny fitaovany voatanisa dia ampiasaina betsaka amin'ny fiara, fiaramanidina ary indostria mpamokatra hafa ary koa indostria fanodinana mekanika isan-karazany. Walter Company dia iray amin'ireo orinasam-pamokarana fitaovana karbida simenitra malaza manerantany.